Wednesday 17th July 2019 09:04:27 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Hargeysa(Karin News) – Masuq maasuq xoogleh ayaa laga soo sheegayaa Wasaaradda Waxbarashada Somaliland kaasi oo sababay in Hay’adda qaranka u qaabilsan dabagalka Hantida qaranku baadhis ku galalafaan.
Arimaha kale ee iyaguna cadaynaya in Musuq maasuq ka dhex jiro Wasaaradda Waxbarashada ayaa waxa ka mid ah in mashruuc lagu qiimaynayay Jamaacadaha Dalka in lacagtii yarayd ee loo qoondeeyay shaqaalihii hawshaasi qabanayay in iyagana laga cunay.
Wararka arintani ku saabsan ayaa sheegaya in calaa qof loogu talo galay 1500,000 (Milyan iyo Shan boqol) oo shilinka Somaliland, islamarkaana markii ay hawshii soo dhameeyeen in Zaadka loogu diray 200,000-kun. Arintaasi ayaa waxay wasaaradda ka dhex dhalisay Buuq, markii ay meel walba gaadhay ayaa markii dambe shaqaalihii dib loo siiyay lacagtii oo dhamaystiran. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaar ka mid ah shaqaaluhu diiday inay xiitaa qaataan lacagtaasi, waxaanay arimahani ka mid ahaayeen waxyaabaha soo dedejiyay in Hanti dhawrku galo wasaaradda.
Warar Dambe La Soco
Isu-duwaha Wasaaradda Caafimaadka Ee Togdheer Oo Dhaliilo Culus Lagu Karbaashay & Degmo Uu Xaqeedii Duudsiyay Oo Afk
Taliska Ciidanka Booliska Oo Saldhig Cusub Kala Wareegay Wakaaladda Biyaha Hargeysa [Muuqaal]
Beellaha Gobolka Sanaag Oo Hadhimo Sharafeed Ku Maamusay Wasiirka Cusub Ee Cadaalada Somaliland [Muuqaal]
[Daawo:-] Wasiir Ku-xigeenka Cusub Ee Wasaaradda Maaliyada Oo Hargeysa Lagu Soo Dhaweeyay.